စာရိတ္တဆိုင်ရာအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဇူလိုငျ ၁၂, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဒီခေတ်ကြီးမှာ … ယနေ့ မျက်မှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေတ်ကြီးမှာသေသေချာချာလေ့လာသုံးသတ် မည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ လူဦးရေကများသထက်များလာတယ် ဒါပေမဲ့အသက်တွေတိုပြီး၊နည်းသထက်နည်းသွားကြတယ်လေ။
နေအ်မသ်တော်များနှင့်လူသား၏တာဝန် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည်မိမိ၏အထူးပေးကမ်းရက်ရောမှု၊စွန့်ကြဲမှု၊ရဟ်မသ်တော် ၊နေအ်မသ် တော်၊ မေတ္တာ၊ဂရုဏာတော်၊ချီးမြှင့်ပေးသနားမှုတို့ဖြင့်ဤလောကတွင်အခြားအဖန်း ဆင်းခံများ၊ယုတ်စွ ကောင်းကင်တမန်များကိုမပေးထားသည့်နေအ်မသ်တော်များကိုမနုဿလူသား အားချီးမြှင့်ထားတော်မူပေသည်။
သူတပါးကိုနှောက်ယှက်၊ဒုက္ခပေးခြင်း တမန်တော်မြတ်(ဆွ) မိန့်တော်မူသည်မှာ - မည်သူမဆို သူတပါးကို နှောက်ယှက်၊ ဒုက္ခပေးပါက အကျွန်ုပ်တို့ကို နှောက်ယှက်၊ ဒုက္ခပေးခြင်းနှင့် တူညီ၏။
ဇှနျ ၁၆, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဂျာဟေလ်တို့၏အမှတ်အသားလက္ခဏာများ ရှိက်ခ်ဂျမားလ် ဟိုစိုင်း(န) ရေးသား သီးကုံး ထားသည့် “ဂျာဟေလ်တို့၏အမှတ်အသားလက္ခဏာများ” ပို့စ်အား စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များအတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များအဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီး msm site မှ တဆင့် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
ဇှနျ ၁၃, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ပြုမူဆက်ဆံခြင်း ရွခ်စာနား ရေးသား သီးကုံး ထားသည့် “သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ပြုမူဆက်ဆံခြင်း” ပို့စ်အား စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များအဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီး msm site မှ တဆင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဇေနာ နှင့် နေကာ
ဇှနျ ၁၀, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဇေနာ နှင့် နေကာ မမာလာသန်း ၊ ရေးသား ထားသည့်((ဇေနာ နှင့် နေကာ )) ပို့စ်အား အင်ရှာအလ္လာဟ် အကျိုး အထူးရှိမည်ဟု မျှော်လင့် မိ ပါသဖြင့် ကျွန်တော်များ အဗ်နာ သတင်းဌာနမှ ၊လေးစားအပ်ပါသော ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခြင်း
Aga Haider Mashedyရေးသားထားသည့် ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခြင်း အား msm site မှ တိုက်ရိုက် ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် ကူးယူဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။ အဗ်နာ သတင်းဌာန
သတိ ! ! !
msm site မှ ဇင်မင်း ရေးသားထားသည့် အဖိုးတန် ပို့စ်လေး အား အဗ်နာ စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များ အဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီး တိုက်ရိုက်ကူးယူတင်ပြအပ်ပါသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ) သခင်သည် မိမိ၏အပေါင်းအပါး သာဝကတော်တချို့ဖြင့် မစ်ဂျစ်ဒ် တွင်ထိုင်နေတော်မူ၏။ ပြီးနောက်စကား ဆိုနေလေသည်။ ကိုယ်တော်(ဆွ)၏ သာဝကတော်များမှ တစ်ပါးဖြစ်သည် ဟဇရတ် စလ်မန်းဖွာရစီ(ရ.ဟ) သည်မစ်ဂျစ်ဒ် တွင်း သို့ဝင်လာလေသည်။